निकिशालाई दुव्र्यवहार गर्ने केटाहरु फेलापरे : यस्तो सजाय हुने भो ! – Khabar PatrikaNp
November 21, 2020 73
काठमाडौँ । सामाजिक संजाल टिकटकमा चर्चित निकिशा श्रेष्ठमाथि दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गर्दै श्रेष्ठमाथि दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
श्रेष्ठमाथि भएको दुव्र्यवहारको व्यापक गुनासो आएपछि कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायत जानकारी दिएका छन् ।
बाटोमा हिँडिरहेकी निकिशालाई केही युवाहरुले दुव्र्यवहार गरेपछि उनलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा आवाज उठ्न थालेको थियो । निकिशाले सर्वसाधरणहरुले जस्तै इज्जतका साथ बाँच्नपाउनुपर्ने भन्दै उनको पक्षमा आवाज उठेको थियो ।
निकिशा श्रेष्ठ आफूलाई ट्रान्सजेन्डर महिलाका रुपमा परिचित गराउँछिन् । पुरुषका रुपमा जन्मिएकी उनले आफ्नो वास्तविक पहिचान महिला रहेको र महिला नै भएर बाँच्ने भनी आँट गरेर निकेश श्रेष्ठबाट नाम परिवर्तन गरी निकिशाका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेकी छन् । टिकटकमा चर्चित उनले केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन् ।
Prevगरे के सम्भव छैन ? यी हुन् खुट्टाले विमान उडाउने संसारकै पहिलो र एकल महिला पाइलट
Nextकेही दिनअघि मात्रै पुजिएका ११ गाई एकै ठाउँमा मृत अवस्थामा भेटिए, देख्नेका आँखा रसाए
हाँस्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल(धुर्मुस)भन्छन्–‘हरेक नेपालीलाई खुशी बनाउने सपना छ’
मन्त्रीमण्डलमा आउने २२ अनुहार , नयाँ १५ पुराना ७ जना
भाइटीका लगाएर घर आएकी श्रीमतीको गरे श्रीमानले ह, त्या